နှလုံးသားရပ်ဝန်းမှ အသံများ...။: ရင်ခုန်သံ ကြိမ်နှုန်းများ ထပ်တူကျခြင်း။
ရေးသားသူ Ko Boyz at 11:09 AM
ကြည် September 1, 2009 at 12:25 PM
ဟာမိုနီဖြစ်တဲ့ သူငယ်ချင်းရတာ ၀မ်းသာပါတယ်..
မောင်မောင် September 1, 2009 at 12:26 PM
ကိုဘွိုင်းဇ် က လဲ အဲဒီသီချင်း လွှမ်းမိုး ဆိုထားတာ သိတာပေါ့။ သိပ်ခေတ်နောက်မကျသေးပေမယ့် ခုခေတ် ၁၀ ကျော်သက် လေးတွေ က ဘယ်သိတော့မလဲဗျ။ သူတို့သိတာ စိုင်းစိုင်း နဲ့ ကြက်ဖ တို့လောက်ပဲ။
ဟင်္သာတို့ ရဲ့ နန်းတော်ရှေ့သီချင်း ကို လိုက်မဆိုဖြစ်ဘူးဗျ။ နားထောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
Ko Boyz September 1, 2009 at 12:32 PM
အနှစ်၂၀ မကတော့ဘူး ကိုမောင်မောင်ရ။
ကိုမောင်မောင် မသိဘူးဆိုရင် ကျွန်တော့် အံ့အားသင့်တော့မလို့..။
subuueain September 1, 2009 at 12:35 PM
Moe Cho Thinn September 1, 2009 at 12:49 PM
သီချင်းအကြိုက်တူရင် မြန်မြန် ခင်မင်ရင်းနှီးလွယ်သလိုပဲ။ ပြီးတော့ အဲဒီ ခင်မင်မှုကလဲ ခိုင်မြဲတတ်တယ်။ တို့လဲ အဲဒီလွှမ်းမိုးသီချင်း ရကြောင်းပါ ဘော်ဒါ။ မာရဇ္ဇလဲ ထပ်ဆိုသေးတယ်။
ကိုဘ တို့ ဆို လွှမ်းမိုးတင်ဘယ်ကမလဲ ဂီတနက်သန် ကိုစောငြိမ်းတောင်သိတယ် (အသက်ကတော့ ၂၂ ပါ ဟိဟိ ဒါမှ ပြောင်းပြန်ပြောလို့ မရမှာ)
သီချင်းမှန်သမျှ ကြိုက်တတ်ရင်တော့ သိကြတာများတယ် ထင်ပါတယ်
မသိရင်တော့ observation နည်းလို့ ပဲ (ကြောက်၂နဲ့ ရေးသွားသည် မည်သူ့ ကိုမှ မရည်ရွယ်ပါ ရေးပြီးမှ လန့် ထှာ)
Ko Boyz September 1, 2009 at 1:35 PM
လွမ်းမိုးတင် သူသိတာ မဟုတ်။ မင်းအောင်၊ အနိုင် မောင့်အချစ်က ပိုပါတယ်တို့... ဟိုတောင်ဆီက မိုးညိုရင် တို့ အဲဒီ ခအောင်းသီချင်းဆိုပြတာ သူလဲ ဆိုတတ်တယ်ဗျ။ လက်လန်တယ်။ ဖုန်းနံပါတ် မတောင်းလိုက်မိဘူး။
maylay September 1, 2009 at 5:28 PM
ကိုကြီးရော အဲ့သီချင်းတွေ ရလား။ မေလေးလည်းရပါတယ်။ ဟုတ်တယ် သီချင်းကြိုက်တာတူတော့ ရင်းနှီးမြန်တယ်နော်။ သီချင်းဆို အကုန်လုံးကို ကြိုက်ပါတယ်။ ဟို ကိုမောင်မောင်ပြောတဲ့ ကြက်ဖ စိုင်းစိုင်းတို့တော့ နားမထောင်ဖြစ်ပေါင် နားအူပြီး သူတို့ပြောနေတာတွေကို နားမလည်လို့ (ကိုယ်ပဲ ပိန်းနေလို့လား မသိဘူး) အိပ်ခါနီးအထိ ပါးစပ်ထဲ သီချင်းရှိတယ်။ ကျန်တာမလိုဘူး။ အဲလောက်ထိ ကြိုက်တယ်။
rose of sharon September 1, 2009 at 7:14 PM
ဒို့လဲနိုင်တီးဂွမ်တီးကပါဘဲ... ဒါပေမဲ့ အဲဒီသီချင်းမသိဘူး... ပိန်းတယ်နော်
ကေဇက် September 1, 2009 at 8:09 PM
အသက် ၃၀- ၃၅ လောက်လူတွေ လွှမ်းမိုးကို သိပါတယ်း) သိပ်မထူးဆန်းပါဘူး
ခင်မင်းဇော် September 1, 2009 at 10:24 PM
ဟင်္သာတို့ရဲ့ နန်းတော်ရှေ့မှာ တံခါးမှုးဖြစ်ပါရစေ....
အမလဲ ရပါတယ်.... ဟဲဟဲ
Ko Boyz September 1, 2009 at 10:25 PM
အစ်မက ၆၀ ကျော်နေမင့်ဟာ...။
PAUK September 1, 2009 at 10:58 PM
ခေါင်းစဉ်က( ခြင်း )မှာ အောက်ကမြင့်ပါနေတယ်..
ကိုဘတို့လောက် တော့ ဘယ်ဟုတ်ပါ့မလဲ..
ကလူသစ် September 1, 2009 at 11:13 PM
လွှမ်းမိုးဆိုတာ အဆိုတော်လား။ သိပါဘူးဗျာ။ ကြက်ဖတို့ ဂျေမီတို့လို ခုန်ဆွခုန်ဆွ သီချင်းဆိုတတ်လား။ စိတ်ဆိုးနဲ့နော် မေးကြည့်တာ။
ကောင်းကင်ရဲ့ သမီးပျို September 2, 2009 at 2:59 AM
ဟာ ကိုဘွိုင်းကလဲ အဲဒီသီချင်းသိကြပါတယ် နန်းတော်ရှေ့မှာတံခါးမှုးဖြစ်ချင် တာ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား ပြန်ဆိုတေးတွေကြောင့် သိကြမယ်ထင်ပါတယ် စ ဖတ်တုန်းကတော့ ဟိုးအရင်တုန်းက သီချင်းလားလို့ သူများတွေတော့ သိဘူး သမီးပျိုကတော့ အော်..မြရင်...မြရင်....မြရင် တို့တောင်သိတယ် နဲနဲပါးပါး ပြောဘာဒယ် ဟဲဟဲ
မီယာ September 2, 2009 at 5:16 AM
အကြိုက်ချင်းတူရင် ပိုရင်းနှီးမြန်တာ အမှန်ပဲ...
Ko Boyz September 3, 2009 at 12:19 AM
အဲဒီသီချင်းကို ပြန်ဆိုတာ ရှိသေးလား။
maylay September 3, 2009 at 11:34 AM
လွှမ်းမိုးးသီချင်းတွေကို မိုးစက်နှင်းဆီသို့တမ်းချင်း ၁ ၂ ၃ ဆိုပြီးထွက်တယ်။ အဆိုတော်အသစ်တွေရော အဟောင်းတွေကပါ ပြန်ဆိုထားတာပေ့ါ။ လွှမ်းမိုးတူ နန္ဒဧရာတော့ သူ့ဘာသူ သပ်သပ်ခွေနဲ့ ဆိုတယ်လေ။ အဲ့သီချင်းကိုတော့ မာရဇ္ဇက ဆိုတယ်။ လွှမ်းမိုးဓါတ်ပုံတွေ ဝေဝေဆာဆာနဲ့ တော်တော် အလွမ်းပြေပါတယ်။
ksanchaung September 3, 2009 at 9:49 PM
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းကပေါ့ကွာ။ (လွမ်းထှာ)။ သူနဲ့ အဘနဲ့ ရင်ခုန်သံချင်း ထပ်တူကျခဲ့သပေါ့။ ရာသီတွေ အလီလီပြောင်းလို့ ခုတော့လေ . . . ။ ခုတော့ အကြိုက်ချင်းတူ ရန်သူတွေဖြစ်ကုန်ပြီကွ ငါ့တူရ။(သနားထှာ . . . ကိုယ့်ကိုကိုယ်။)
jr.lwinoo September 4, 2009 at 1:58 AM
အဲလို ရင်ဘတ်တူတဲ့ လူတွေ ဘ၀မှာ တကယ်လိုအပ်ပါတယ်..
အဲလို ရင်ဘတ်ချင်းတူတာ သိလိုက်ရတာ ဘာနဲ့မှ မတူဘူးနော်..
ဆည်းဆာ September 5, 2009 at 2:53 AM
Ko Boyz September 5, 2009 at 9:52 AM
ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ ရေးချင်တယ်ဆိုရင် အောက်ကလင့်ခ်မှာ သွားရောက် လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား...။